Hay'adaha Banki ee Dibada ee ugu Fiican Hay'adaha iyo Xukummada
Xukummada Bangiga Caalamiga ee Ugufiican
Xukummada Bangiga ka baxsan ee ku qoran sharciyada
Halkan waxaa ah liistada kuwa ugu wanaagsan oo lagu taliyay bangiga badda xukumada. Nasiib wanaag, waxaan sameynay baaritaan ballaaran. Sidaa darteed, waxaan ku siin karnaa talooyin iyo talo si aad shaqadaada u fududeyso. Sidaas oo ay tahay, waddamadan waxay leeyihiin sharciyo bixiya nabadgeliyada dhaqaalaha, asturnaanta, fududeynta oo bixiya soo-laabasho tartan maalgashi.
Lacagta bilowga ah ee ka badan $ 250,000:
OffshoreCompany.com waxay ku takhasustay akoonnada bangiga ee Switzerland iyo awoodaha kale ee habboon. Marka, fadlan buuxi foomka wadatashiga ama isticmaal mid ka mid lambarrada taleefanka ee ku yaal boggan. Intaas waxaa sii dheer, waad booqan kartaa qaybteena oo dhan boggaan Baanka Swisska.
Miisaaniyada hoos yimaada $ 250,000, halkan waxaa ku yaal qodobbada lagu taliyey:
Caribbean (dalal badan - wac lambarka taleefanka kor ku yaal si aad u hesho faahfaahin)
Jasiiradaha loo yaqaan 'Cook Islands'
Caribbean iyo Belize (eeg hoosta calaamadda cas)
Wadamada cashuurta ku jira, kormeerka furitaanka xisaabta ayaa ka hooseeya. Dhanka kale, asturnaanta ayaa sarreysa. Xukunka Yurub, si kastaba ha noqotee, waxaa jira heshiisyo kor u qaadaya shuruudaha waajibaadka bangiyada xubnaha. Markaa, milkiilayaasha xisaabaadka leh waxay u baahan yihiin inay soo saaraan dukumiinti-aqoonsi-ka-macaamiil-dheeraad ah. Waxay ugu yeedheen heshiiskan Tilmaamaha Canshuuraha ee Midawga Yurub 2005.
Kadib, Bishii Diseembar 2014, Golaha Midowga Yurub wuxuu qaatay Tilmaamaha 2014 / 107 / EU. Tani waxay bixinaysaa iskaashi banki / dawladdu la leedahay arrimaha cashuurta (“Tilmaanta Caawinta Labada Dhinac ee EU”). Markaa, bangiyadu waxay sheegaan inay kasbadeen dulsaar iyo saamiyo, iyo sidoo kale dakhliga kale ee dhigaalka. Sidaas darteed, waddamadu waxay is dhaafsadaan macluumaadka canshuurta wadamada kale.
Dardaarankaani waxay si xun u saameyn karaan asturnaanta bangiyada ee dalal gaar ah oo ay ku khasban yihiin. Intaas waxaa sii dheer, Tilmaanta Canshuuraha ee EU waxay xadidi kartaa qarsoodiga iyo asturnaanta maal-geeyayaasha bangiyada dibedda. Si ay u caddaato, tani waxay khusaysaa oo keliya bankiyo ku yaal meelaha xukummada ka hooseeya qaynuunnadan.
Wadamada hoos yimaada Tilmaanta Bangi ee Midowga Yurub
Sidan oo qoraal ah, wadamada xubnaha ka ah Midowga Yurub waa sida soo socota:
Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, iyo Boqortooyada Ingiriiska. Wadamada EU ka sokow, amarku wuxuu kaloo kujiraa heshiisyo dhexmara EU iyo Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, iyo Switzerland.
Xukun kasta oo ka mid ah dowlad wadaagnimada waxaa ku hoos jira Tilmaanta Canshuuraha ee EU. Intaa waxaa u dheer, sidoo kale wadamo kasta oo hoos imaada xukunka, ama wakiil ka ah ummadahan iyagana sidoo kale. Kuwa kale ayaa waliba raali ka noqon kara, sida Switzerland iyo Mareykanka.
Si fudud ayaa loo qeexay, 2014 waa heshiis ka dhexeeya Dawladaha xubinta ka ah EU iyo sidoo kale liistada waddamada ku dhow. Waxay, si gaar ah, u oggolaaneysaa is-weydaarsiga macluumaadka maaliyadeed ama macaamil xawilaadda. Midowga Yurub wuxuu heshiiskan ugu yeeraa "is-weydaarsiga macluumaadka xulashooyinka" waana astaanta tilmaamaha.
Shuruucda Dibedda ee aan ku xadgudbeynin shuruucda EU ama hagida kama qeybqaadan heshiiskan. Markaa, waxay awood u siinayaan kuwa wax iibsada ee awoodahaas inay kordhiyaan heerarka sirta.
Xeerarka kale ee Bangiyada
Waxaa jira sharciyo kale oo badan oo ka baxsan xeebaha kuwaas oo bixiya faa iidooyin badan oo isku mid ah kuwa noocyada EU ay sameeyaan. Laakiin kuma xirna Tilmaanta EU. Looma baahna in la sheego, tani badanaa waa tixgelin aad u muhiim ah maalgashade ama xoolo-doon doonaya raadinta asturnaanta. Tani waa sababta oo ah waxaad ubaahan kartaa faa iido gaar ah oo ku xusan xukunka Taliska EU uusan la kulmi karin. Runtii, tani waa tixgelin muhiim ah. Si kastaba ha noqotee, waa inaadan si toos ah ugu qaadin inay had iyo jeer faa'iido u leedahay inaad bangi ku xukumaan amar aan toos ahayn ee Tilmaanta EU.
Ka soo qaad in alaab-hayaha dhici kara uu buuxiyo lacagta xaddiga dhigaalka hore. Waxa uu leeyahay himilooyinkiisa bangiyada iyada oo la waafajinayo bangigiisa iyo xaddigeeda. Sidaas oo kale, goobaha laga dhisay xeebaha sida Switzerland ayaa sifiican ugu habboon baahidiisa. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira sharciyo aad u karti badan oo aan ku hoos jirin Amarka Canshuuraha ee EU. Waxay lahaan karaan shuruudaha deebaajiga bilowga ah oo aad uga hooseeya kuwa “awooda”. Tusaale ahaan, awoodaha qaarkood sida St. Vincent iyo Belize waxay u baahan karaan waxyar sida $ 2000 US si loo bilaabo.
Sidee baanku u Bedelay
Kahor qaraxii internet-ka ee bartamihii-90 ee iyo weeraradii argagixiso ee 9 / 11, adduunka banki wuxuu ahaa mid aad uga fudud. Tusaale ahaan, akoonnada akoonnada ku leh iyo kaydiyaasha suurtagalka ah ee bangiyo shisheeye waxay ahayd inay macno ahaan u galaan bangi. Tan waxaa loo baahnaa si loo furo xisaab. Haddii kale, waxay si fudud u diri karaan wakiil idman oo sidaas sameeya. Waxay ahayd inay aas aasaan xisaabaad, ay xawilaan lacagaha, ama ay heshiis shaqsi ah la galaan. Qaabkii hore ee "sanduuqa qufulka iyo furaha" ayaa xukumaa.
Si kastaba ha noqotee, illaa bartamihii-90's, waxaa jiray isbeddel weyn. Waxa ka dhacay qarax run ah oo tikniyoolajiyad ah oo aan hore looga sii saadaalin karin in badan oo ka mid ah warshadaha adeegga adduunka. Dabcan waxaa ka mid ah bangiyo shisheeye.
Waa maalmo ay tahay in si dhab ah loogu socdo bangiga. Hadda, adeegyada badankood sida ugu dhow keyboardka kuugu dhow. Sidaad ogtahay, waxaan hada helnaa shabakada aduunka oo idil akoonada. Waxaan sidoo kale leenahay kaarka deynta sida kaararka deynta iyo imaatinka lacagaha wareejinta elektiroonigga. Intaa waxaa sii dheer, farahayaga ayaa ah saxiix sax ah, iyo marin u helka internet-ka. Markaa, bangiyo dibadeed ayaa loo beddelay xal ka fudud shaqsiyaadka iyo shirkadaha.
Macno malahan hadii bangigaagu ku yaal gobolka Grand Canyon ama Grand Cayman. Inta badan astaamaha ay bangiyadu soo bandhigaan ayaa ah uun jiirka far-ka-fog. Aynu soo qaadno inaad la kulanto oo aad u hoggaansanaato taxaddarrada oo dhan oo aad ku lug yeelato nashaadaadyo sharciyeed. Hadday sidaas tahay, qarsoodiga wixii deebaaji ama maalgashi la hubo waa aamin sida ay waligeed jirtay.
Macluumaadka Bangiga ee dheeraadka ah
Xisaabaadka bangiga dibadda U shaqeeyaan si la mid ah koontada bangiga ee caadiga ah. Bangigu wuxuu furayaa akoonka. Markaa kadib, macaamilku wuxuu helaa kaarka deynta bangiga ama kaarka deynta. Lacag-bixiyeyaasha ayaa marin u leh khadka tooska ah. Sameynta wareejinta xargaha iyo sameynta akoonnada xawaaladda caadiga ah way sahlan tahay. Si fudud uga gal qadka oo raac tilmaamaha. Baananka shisheeyaha waxay bixiyaan adeegyo badan oo isku mid ah kuwo badana waxay bixiyaan adeeg macaamiil weyn. Markii aad dooranaysid machadkaaga waxaa muhiim ah inaad doorato bixiye ku habboon seenyadaada.
Sida la sheegay, xarumo badan oo bangiyo dibedda ah ayaa kuu oggolaanaya inaad sameysato akoon bangi adoo dhigaya wax ka yar $ 2000. Xaaladaha kale, waxay kuxirantahay bangiga, waxaad ku shubi kartaa wax ka yar. Intaas waxaa sii dheer, dhammaan bixiyeyaasha lagu soo jeediyo bixiyeyaasha koontada bangi ee lagu taliyay inay si weyn u nidaamsan yihiin ayna u hoggaansan yihiin shuruucda asturnaanta caalamiga ah ee adag. Xisaabaadka gaarka loo leeyahay caadi ahaan waxay ubaahan yihiin lacag dhigaal bilow ah. Si kastaba ha noqotee kuwaani waa laga wada xaajoon karaa iyada oo ku xidhan ujeedooyinka xisaabta guud iyo saadaalinteeda.
OffshoreCompany.com waxay baartaa bixiyeyaasha adeegyada maaliyadeed ee adduunka. Waxaan hubineynaa in macaamiisheenna ay akoonadooda ku geli karaan taleefan, fakis, emayl iyo internetka. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku dadaalnaa sidii aan u hubin lahayn inay tixgeliyaan baahida macaamiisheena. Intaas waxaa sii dheer waxaan rabnaa inaan hubinno inaan nahay dad caqli leh oo asturan.
Had iyo goor, dheelitirka koontadaada ee dibedda waxay ku kasban doontaa dulsaar. Waxaad sidoo kale na weydiisan kartaa inaan sameysanno koonto maalgashi oo ka baxsan xeebta. Dulsaarka iyo faa'iidooyinka maalgashigu badanaa waa ka madax banaanaadaan cashuuraha maxalliga ah ee awoodda bangiga. Qiimaha dulsaarku badanaa wuu sarreeyaa oo ajuurada ayaa tartamaysa. Shirkado badan oo 500 ah oo nasiib badan, oo ay ku jiraan shirkadaha saliida ayaa ka faa'iidaysta bangiyo shisheeye. Qaar ka mid ah xeryaha caanka ah ee canshuuraha ee caanka ah waxay leeyihiin boqolaal bangiyo heerka koowaad ah oo ay ka dooran karaan.
Hay'adaha maaliyadeed ee maamulada gaarka loo leeyahay uma soo sheegaan macluumaadka koontada macaamiisha dawladaha shisheeye. Xitaa uma soo sheegaan iyaga laftooda. Markaa waxay ku xiran tahay qofka akoonka haysta inuu sidaa sameeyo. Shirkad mas'uul ah, dabcan, waxaan kugula talineynaa inaad u hogaansanaato canshuurta Shuruucda qaanuunka ee waajib kugu ah. Wadamo badan, oo ay kujirto canshuurta Mareykanka ee dakhliga adduunka. Markaa, marka hore waxaan kaa caawinaynaa abuuritaanka shirkadaada iyo koontada. Markaa, waxaan haysanaa CPA-yada kuwaas oo aqoon u leh arrintaas kana caawin kara u hoggaansanaanta canshuuraha ee dakhligaaga caalamiga ah.
OffshoreCompany.com waxay dhistaa kumanaan dhismeyaal ganacsi, koonto bangi, asturnaanta iyo qorshayaasha ilaalinta hantida ee adduunka oo dhan. Ilaalinta iyo kobcinta dhaqaalaha macaamiisheena ayaa ah waxyaabaha nooga walaac weyn.
Hay'adaha bangi ka baxsan waxay bixiyaan faa iidooyin badan oo kala duwan, marka ay timaado asturnaanta Switzerland way adag tahay in la garaaco. Waxaan bixinay qayb dhammaystiran oo ku saabsan Bangiyada Swiss halkaas oo aad wax badan ka baran karto akoonada bangiga gaarka ah.
<Illaa cutubka 10
Ilaa cutubka 12>